Ukufakwa kwenkampani elunxwemeni eMauritius - iNkampani yaseSwitzerland yeOfisi yeLwandle
IIMauritius lilizwe elisisiqithi elikwiLwandlekazi lwaseIndiya, kwimpuma yeMadagascar. Yenziwe sisiqithi esiyintloko segama elifanayo, kunye neziqithi ezincinci zeBrandon, iCargados, iRodrigues kunye neziqithi zeAgalega.
Indawo elungileyo yokubamba ishishini lakho
Ukulandela ukuhlala ngokufutshane ngamaDatshi, ilizwe lahluthwa yiFrance ukusuka ngo-1715 ukuya ku-1814, owaphulukana nayo ne-United Kingdom. Inkululeko yafunyanwa ngo-1968, yaba yiRiphabhlikhi ngo-1992, nangona yayihleli kwi-Commonwealth. Ifunyenwe kunxantathu wegolide, odibanisa iAsia, iAfrika neOceania, iMauritius yindawo yokudibana kwempucuko yehlabathi, indawo apho unokuziva khona ukubetha kwehlabathi.
Las iinkampani ezingaselwandle ifakwe eMauritius inikezela ngeqondo eliphezulu ukugcinwa kwemfihlo kwaye zilungele ukusetyenziswa njengoko ukubamba ishishini kunye nolawulo lweeaseti zabucala. Baxhamla kukhululo lwerhafu kulo naluphi na uhlobo lwengeniso eyenziwe, nangona bengakwazi ukuthengisa nabahlali. Nangona kunjalo, banako vula iiakhawunti zebhanki engaphesheya.
Ukusuka Ukunyanzelwa kweSwitzerland, abacebisi abazimeleyo nabamabhanki babucala bamazwe aphesheya, silawula umgaqo-siseko Inkampani esekwe elunxwemeni eMauritius kunye ukuvulwa kweakhawunti ezona zilungele iimfuno zakho. Sikwanayo le nkonzo kwiindawo ezingaphezulu kwama-40 kwimimandla emihlanu.
Kusemthethweni na ukufaka inkampani elunxwemeni eseMauritius?
yenza a Inkampani esekwe elunxwemeni eMauritius Kusemthethweni. Kuya kubakho ukuchasana nomthetho xa umnini wale nkampani engazalisekisi uxanduva lwerhafu kwilizwe lakhe kwaye engachazanga iimpahla anazo phesheya. Ukuba unemibuzo malunga noku, nceda qhagamshelana nathi.
Inkqubo yokwenza Inkampani e Mauritius ifuna umsebenzi weengcali ebaleni kunye neengcebiso ezifanelekileyo ukuze ungaweli kwizitenxo. Nge Ukunyanzelwa kweSwitzerland, Abacebisi bezimali bamazwe aphesheya nabazimeleyo, unokuseta inkampani yakho engaselunxwemeni ngeakhawunti yebhanki ukusuka kwindudu yekhaya lakho, enkosi kuthi umgaqo-siseko weenkampani ezingaselwandle kumgama, ongayi kuba nexhala malunga nento.
Kutheni kufuneka ubandakanye eMauritius?
Ukukhula okuzinzileyo koqoqosho
Into eyaziwayo ngayo imbali yayo enomtsalane: Uzinzo kwezopolitiko kunye ngaphezulu kweminyaka engamashumi amathathu yokukhula koqoqosho oluzinzileyo.
Indawo yotyalo-mali ekhuselekileyo
ELulawulo oluxabisekileyo ngenxa yobunzulu bayo kunye nodumo, yindawo ekhuselekileyo yokutyalomali, evulelekileyo kubatyali bamanye amazwe kwaye yenye yezona ndawo zikhulu kwezoqoqosho kwihlabathi.
Tokunye ukuxolelwa kwirhafu kunye neendleko eziphantsi zolawulo kunye neemfuno. Ulawulo olugqibeleleyo nolulwimi-mbini lolawulo lwabasebenzi abanobuchule.
SIcandelo lebhanki libonelela ngenkonzo elungileyo kunye nolwazelelelo, ukuba yenye yezona zilungileyo kwilizwekazi laseAfrika. Ubumfihlo kunye nokuguquguquka kugqwesile.
Loluphi uhlobo lwebhanki yabucala ekhoyo eMauritius?